Earldom Smart Phone frame frame ချိန်ညှိနိုင်သော Dashboard မိုဘိုင်းဖုန်းဘောင်ကားလက်ကိုင်ဖုန်းထိုင်ခုံ | Earldom
Earldom အဓိက 3C ဒီဂျစ်တယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပြည့်အဝထုတ်လုပ်မှုနှင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစွမ်းရည်များနှင့်အတူနှစ်ပေါင်း 30 အနှစ် 30 ကြာ။
အရည်အသွေးမြင့်ကားကိုင်ဆောင်သူ Eh102 လက်ကား - Shenzhen Kaisinuo အီလက်ထရောနစ်အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Ten Stand and Phone Holder နှင့်အတူအိတ်ဆောင်လက်စွပ်အလင်း, 10 လက်မအရွယ်ခေါက်နိုင်သောစက်ဝိုင်းအလင်း, improxe streaming, iPhone Selfie ဓါတ်ပုံများ, YouTube ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်ချိန်ညှိထားသောစားပွဲတင်မီးခွက်
Car Mobile Cell Phone Holder ရှိ iPhone Samsung အတွက် Earldom Car Phone Magnet Magnet Magnet Magnet Magnet Mount
Earldom EH129 ကားဖုန်းခေါ်ဆိုသူ Mount Selefon Pro Max X78 Pro Max X78 Plus Xiaomi အတွက် Telefon Mobile Cell Support
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကားကိုင်ပါ
Earldom Smart Phone frame frame ချိန်ညှိနိုင်သော Dashboard မိုဘိုင်းဖုန်းဘောင်ကားလက်ကိုင်ဖုန်းထိုင်ခုံ
တောင်ပေါ်ကကား Holder ဖုန်း
Fixed မော်တော်ကား Air ကိုအပေါက်တွေတောင်ပေါ်မှာ Holder
Smart Phone frame ချိန်ညှိနိုင်သော Dashboard မိုဘိုင်းဖုန်းဘောင်ကားလက်ကိုင်ဖုန်းထိုင်ခုံ
နက္ခတ္တဗေဒဘာသာသို့ ဦး စွာရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ ဦး စားထားသည့်အစောဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအားညကောင်းကင်ယံနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားမှုစတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့အားပြသလိုသောတစ်ခုတည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြယ်စုကိုရှာဖွေခြင်း၏ပျော်စရာဖြစ်သည်။ သို့သော်ကြယ်များကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကောင်းကင်ကိုသွားလာရန်သူတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လူ၏အရုဏ် ဦး ကိုပြန်သွားရန်စည်းကမ်းတစ်ခုမှာစည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ, ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဂူဂဲလ်ရုပ်ပုံများအရလူ့အဖွဲ့အစည်းများပိုမိုများပြားလာလေများကကောင်းကင်၌ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၎င်းတို့အားအရေးပါမှုကိုပြသနိုင်သည်။
အရောင်းအ0ယ်နှင့်အရောင်းအ0ယ်0န်ဆောင်မှုကိုဖြည့်စွက်ပါ။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အရောင်းအခွင့်အာဏာရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း0န်ထမ်းများကိုဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်ုပ်တို့တွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုးကားချက်ရှိသည်, ကျေးဇူးပြု. သင်၏အရောင်း0န်ထမ်းများကိုဆက်သွယ်ပါ။
တိုင်းပြည် / ဒေသ
3C digital accessories, data cable, charging, mobile phone holder, car holder, Bluetooth headset, audio, etc.
နှစ်စဉ် output ကိုတန်ဖိုး
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Shenzhen Kaisinuo အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
English Tiếng Việt Türkçe ภาษาไทย ဗမာ bahasa Indonesia فارسی русский Português français Español Deutsch العربية